10 miliara dolara :AVO DIMY HENY NOHO NY TAMIN’NY 2002 -
AccueilRaharaham-pirenena10 miliara dolara :AVO DIMY HENY NOHO NY TAMIN’NY 2002
Na tapitra aza ilay « Conférence des Bailleurs et Investisseurs » (Cbi) tao Paris nokarakarain’ny fitondram-panjakana malagasy iny, dia mbola nitohy foana ny fandraisan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina an’ireo vahiny te hanampy an’i Madagasikara. Izany hoe taty ivelan’ilay Cbi dia mbola nitohy ny fandraisan’olona nataon’ny filoha. Vahiny vonona hanampy ara-bola an’i Madagasikara avokoa ireo noraisiny ireo. Midika izany fa mangetaheta hanampy an’i Madagasikara ireo mpampiasa vola vahiny ary tsy ampy ilay roa andro natokana ho an’ilay fihaonam-ben’ny mpampiasa vola sy ny mpamatsy vola.
Tamin’ilay roa andro nisian’ilay fikaonand-oha lehibe niarahana tamin’ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola moa dia tafakatra 10 , 2 miliara dolara no vola voaangona hanampiana an’i Madagasikara hanatanteraka an’ilay drafitrasa nasionaly ho an’ny fampandrosoana na Pnd. Voarakitra anatin’io drafitra io avokoa ny teboka enti-mampandroso an’i Madagasikara.
Nikarakara “ Conférence des Bailleurs et Investisseurs” tahaka ity koa Ravalomanana Marc tamin’ny taona 2002. Vao nivoaka ny krizy ihany koa i Madagasikara taorian’ny raharaha 2002. Zara raha nahazo 2 miliara dolara isika tamin’izany, kanefa dia nambara ho ren-tany ren-danitra mihitsy fa hiainga amin’izay ny fampandrosoana an’i Madagasikara avy nivoaka tao anatin’ny lavaky ny korontana. Avo dimy heny noho ny tamin’ny 2002 araka izany no azon’ny fitondrana ankehitriny. ( 2×5 =10 ). Mbola notohanana fotsiny aza ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola vahiny te hanampy antsika. Tsy ampihambahambana araka izany ny tena fiaingana vaovao ho an’i Madagasikara manomboka eto. Tena lasa izao! araka ilay fomba fiteny.
Ho an’ny lafin’ny fahasalamana manokana, dia nahatsiaro ho afa-po ny minisitra tompon’andraikitra. Isan’ireo nanatrika ny “Cbi” taty Paris ihany koa moa izy. 500 tapitrisa dolara no tadiavina ho an’ny fampiroboroboana ny lafin’ny fahasalamana. Nanaiky hanome tanana antsika avokoa ireo mpiara-miombon’antoka hoy izy, ka ny fampiharana azy sisa no andrasana. Tetikasa telo lehibe no laharam-pahamehana ho an’ny fahasalamana, dia ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fampihenana ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza ary ny ady amin’ny tazomoka. Ankoatra izay ny fanatsarana ny hopitaly. Isan’ny tena nampazoto an’ireo mpamatsy vola hanampy antsika, hoy ny minisitry ny Fahasalamana ny profesora Lalatiana Andriamanarivo , dia noho ny mpitondra fanjakana ankehitriny tena mandray an-tanana ny fanjakana tsara tantana na ny bonne gouvernance. Taloha mantsy dia niankina be loatra tamin’ny mpamatsy vola isika, ka io toetra io no tsy nampazoto azy ireo hanampy antsika tamin’izany. Izay no manazava an’ilay hoe zara raha nahazo 2 miliara dolara ry Ravalomanana Marc tamin’ny 2002 kanefa ny fitondrana ankehitriny tarihin’i Hery Rajaonarimampianina nahazo avo dimy heny, izany hoe nahazo 10 miliara dolara.